Ama-Myths Banking Amaqiniso kanye nama-Misnomers Aqondiswa
Ama-Myth Banking Myths
Ibhange lase-offshore iza nenhlamba. Ngakho-ke, osomabhizinisi abaningi nabasebenza ngebhizinisi abaqondi. Abanye bagcwala umlomo ngokusho nje ukuthi bangayigcina imali yabo iphephile kwi-akhawunti yasebhange engaphesheya. Izithombe zezikebhe ezisheshayo, ezibizayo, izidakamizwa ze-kingpins, namasudi amhlophe ziya ngokushesha engqondweni. Ngaphezu kwalokho, ukwanda kwama movie amabi waseHollywood, imibukiso yethelevishini, kanye nokuvezwa kabi kwabezindaba akuzange kuguqule lo mbono. Babengekho kude neqiniso.
Abantu Bayisebenzisa Kanjani Ngempela Banking Yasolwandle
Iqiniso yilokhu. Izikhungo zezimali zase-Offshore noma zebhange, ezaziwa nangokuthi izindawo zentela, zikhona kakhulu ngenxa yezizathu ezimbalwa eziphambili. Bangasiza ekuhlinzekeni ukuvikelwa kwempahla, ukukhula kwempahla, kanye nokwehliswa kwentela - ngokuya ngomthetho wakho. Siyazazi izikhungo ezinjalo ukuthi zisebenzele abantu bangaphandle kanye nezinhlangano ezinkulu nezincane emhlabeni jikelele.
I-akhawunti yasebhange ye-Offshore kanye nezikhungo zezezimali zingaletha izixazululo zomhlaba wangempela ezinkingeni eziningi abantu abahlangabezana nazo namuhla. Kungasiza labo abafuna ukuvikelwa kwempahla kusuka kumacala asalinde. Kuyindlela futhi yokunciphisa ukuhlelwa kabusha kukahulumeni wasekhaya ongazinzile.
Ukuze uqiniseke, kungcono ukuhlanganisa i-akhawunti yasebhange engaphesheya nethemba lokuvikela impahla. Ngale nhlanganisela, kunganikeza ukuvikelwa kwempahla kusuka emngciphekweni ojwayelekile. Izingozi ezinje zifaka isehlukaniso, izimo zomnotho ezingezinhle, noma ukubekwa icala. Lezi zingozi zivame ukuhlangana ezweni laseNtshonalanga.
Ama-Akhawunti e-Offshore Bank: Ukuhlukana Kwemali, kanye Neminye Yezenzo Ezimbi
Amabhange emhlabeni jikelele anenhloso eyodwa eyinhloko lapho kuvulwa ama-akhawunti wabantu bakwamanye amazwe. Okusho ukuthi, ukugcina okuhle kukugcina ngaphandle ababi. Ibhange lingalahlekelwa yilayisense layo uma libukeka ngenye indlela lapho lisola imisebenzi esolisayo. Kungalahlekelwa nayikhono layo lokufaka imali kumadola aseMelika noma ama-Euro, empeleni ukuyikhipha ebhizinisini. Ngakho-ke, qiniseka, lapho uvula i-akhawunti, ibhange ngeke likuyeke ukuthi unikeze umazisi wakho. Bazofuna ukubona umthombo ofanele wemibhalo yezimali. Futhi bazofuna ubufakazi bokuthi imali ibivela emithonjeni esemthethweni. Izindleko zokuthola nokugcina ilayisense lasebhange likhulu. Ngakho-ke, amabhange ngeke akuvumele uthathe izinqamuleli. Uma kukhulunywa ngokuthola inkuthalo efanele ebhange lizobheka wonke amabhokisi ngaphambi kokuvula i-akhawunti yakho.
Kungaba iphutha elibi ukusho ukuthi azikho izimali ezingekho emthethweni ezithola ama-akhawunti asebhange aphesheya kwezilwandle. Kepha njengoba sizobona kungekudala, lokho akusho kakhulu. Eqinisweni, ake sibheke leyo mithetho ukuthi umbambeli omaphakathi angahle asole ukuthi unecala. Umthetho okuthiwa "uphephile" unemisebenzi yasebhange engekho emthethweni ukwedlula leyo okuthiwa yindawo "yentela" enayo. Imigwaqo emikhulu “yokuziphatha” enkulu yaphenduka izikhungo ezinkulu zokuhlukumeza imali nezikhungo zokuxhasa ubugebengu emhlabeni. Futhi i-United States ihamba phambili phakathi kwabo. I-US idlulisa ingxenye ebunjiwe yazo zonke imali ezihlanjululwe emhlabeni zihlanzwe ngaphakathi kwezifundazwe zayo ze-50. Le ngxenye ihumusha ekulinganiselweni okulondolozekayo kwe- $ 300 billion US.
Kuyiqiniso, i-United States akuyona ukuphela kwentela ephezulu, noma umthetho “omkhulu” ohlobene nalo msebenzi. Amanye amazwe anjenge-UK neJalimane ahlanganyela kulo mehluko owoyisayo. Abantu base-US intela emholweni womhlaba wonke. Ngakho-ke, ukuhambisa imali kude nolwandle kumathuluzi afanele angokomthetho amaningi ahlinzeka ngezinzuzo zokuvikela impahla. Noma kunjalo, akusebenzi ngokujwayelekile ukwehliswa kwentela. Ukuba yileso sobala sentela kuyinto yangempela entsha, intela ukugwema ukusebenzisa izakhiwo zasemaphandleni akucebisi noma kuphumelele ngokuphumelelayo.
Umbono wamanga ukuthi izindawo zentela ezingasasebenzi / izindawo ezingaphesheya kwezilwandle ziyizindawo ezinhle zokuxhaswa kwemali kwesigebengu. Iqiniso, nokho, ukuthi izindawo zentela ephezulu zigcina iningi lalezi zimali. Izindawo zokukhokha intela ephansi zibonisa iphesenti elincane kakhulu lilonke.
Lezi zinhlobo zamaqiniso, yiqiniso, akuvamile ukuthi zibikwe ezindabeni ze-TV nasemaphepheni wokuphrinta. Iziphathamandla ezibandakanyekile zinamahloni impela ngale mibono eyiphutha emangazayo.
Ngakho-ke, njengoba sikwazi ukubona, kunezinganekwane eziningi ezizungeze ubusika lolwandle. Lapho singena, noma kunjalo, sibona ukuthi ukubuswa kwebhange elingaphesheya kulawulwa kakhulu. Amabhange alahlekelwe amalayisense awo noma ahlawuliswe inhlawulo yokuthathwa kwamakhasimende angenasimilo. Abalawuli bahlala behlola amabhange amarekhodi abo owaziyo amaklayenti akho. Uma umhloli webhange esola ukuthi umuntu othile usebenzisa i-akhawunti yakhe yamazwe omhlaba ngezinhloso ezingezinhle, ngeke bavule i-akhawunti. Uma kusetshenziswe ngale ndlela ngemuva kokuvulwa kwe-akhawunti, maduze nje kuzokhishwa ebhange.
Ibhange eligcina ilayisense layo kuncike kubo belandela imithetho yasekhaya neyamazwe jikelele. Futhi, kufanele banamathele kumazinga anamandla wezezimali. Ngakho-ke, amabhange emhlabeni jikelele asebenza kanzima ukulandela umthetho. Benza konke okusemandleni abo ukugcina abagadi abahle bangene nabantu ababi ngaphandle. Ukuba kwabo ngokwezimali kuxhomeke kukho.